Duullimaadyada gargaarka oo dib u dhacay - BBC News Somali
Duullimaadyada gargaarka oo dib u dhacay
Image caption Dadka abaarta ku barakacay ee gargaarka u baahan
Duullimaadkii ugu horreeyay ee ka mid ah cuntada gargaarka abaarta dayuuradaha loogu geynayo dadka ku sugan caasimadda Muqdisho ayaa dib loo dhigay ilaa maalinta berrito ah sababo xagga maamulka ah awgood, sidaasna waxaa sheegtay hay'adda barnaamijka cuntada adduunka, WFP.
Gurmadka degdegga ah ee hawada la marsiinayo waxaa uu ka kooban yahay 14 ton oo ah cuntada carruurta lagu quudiyo, carruurtaas oo magaalada ku soo qulqulaya iyagoo ka imanaya gobollada ku hareereysan.
Gargaarkan oo laga qaadayo dalka Kenya waxaa maalintii Isniintii laga keenay waddanka Faransiiska. Duullimaadyo noocaas oo kale ah ayaa sidoo kale gargaar lagu geynayaa dalka Itoobiya. Barnaamijka cuntada adduunku meelo yar ayay ka tegi karaan inta badan gobollada bartamaha iyo koofurta Soomaaliya oo ay ka taliyaan dhaqdhaqaaqa Islaamiga ah ee al Shabaab.